Khabiirka Cilmiga ah ee Muhiimka ah ee SEO-ga Local
Ganacsi kasta wuxuu adeegsan karaa SEO-ga maxaliga ah ee faa'iidadiisa. SEO-ga xaafadda wuxuu sii waday inuu koro tan iyo markii la bilaabay barnaamijka 'Pigeon' oo ku salaysan bogga Google sannadkii 2014. Natiijadu waxa ay ahayd in ganacsatadu ay bilaabeen inay eegaan SEO-ga maxaliga ah ee istaraatiijiyadeed ee ganacsigooda inkastoo marnaba aysan u tixgelin sidii dacaayad degaan ah ololaha suuqgeynta ee soo socda. Kuwa isticmaalay istaraatiijiyadii ka hor waxay arkeen casriyeynta sidii fursad ay ku kordhin lahaayeen dadaalladooda dheeraad ah.
Go'aanka lagu raadinayo SEO-ga maxalliga ahi waa mid la fahmi karo maaddaama ay sii wado in ay sii korodho muhiimadda.
Si kastaba ha ahaatee, halkan kuma dhicin iyada oo SEO-yada maxaliga ah ay sii wadi doonaan inay noqdaan kuwo saameyn badan leh iyo Michael Brown, mid ka mid ah khubarada ugu horreeya ee ka yimid Semt , wuxuu sharxayaa sababta:
Google wuxuu jecel yahay ganacsiyada maxaliga ah
Waxaa jira firfircooni yar yar oo shirkadaha yaryar iyo kuwa yaryar oo leh mashiinnada raadinta Google - eleaf istick tc40w instructions. Shirkadda ayaa horay ujirtay rikoodhkii hore, oo ka soo jeeda taariikhda brandka, ama awooddeeda. Si kastaba ha ahaatee, Google ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay dadka siiso waxa ay doonayaan, taas oo ah sababta ay u muujinayaan qaar ka mid ah kuwa yaryar iyo kuwa caanka ah.
Sabab kale oo ay iyagu u qaban lahaayeen waa in ay u suurta galiyaan milkiilayaasha ganacsiga yaryar ee leh kheyraadka xaddidan. Waxaa jira qalabka lacag la'aanta ah oo ay bixiso Google sida Webmaster, iyo Analytics, iyagoo ujeedadoodu tahay inay ka caawiso inay kor u qaadaan muuqaalka internetka
Natiijooyin badan oo shakhsi ah
Google wuxuu jecel yahay inuu sii wanaajiyo waayo-aragnimada macaamiisha isaga oo adeegsanaya adeegyadiisa. Waxaa jiri kara xaddidan xaadirka ah ee saadaasha filimka saadaalinta ah ee la saadaaliyay, laakiin qaabkeeda 'style =' text-decoration: none none-bottom bottom: 1px solid; href = "https://semalt.com/qa/search-engine..htm "> makiinadaha raadinta waxay awood u leeyihiin in ay soo saaraan natiijooyin raadin kuwaas oo udub dhexaad u ah qofka su'aalaha weydiinaya. Taariikhda raadinta iyo joqraafiga ayaa kaalin weyn ka ciyaara markaad soo celinayso natiijooyinka Google. sababta Google ujeedadu tahay inuu keeno natiijooyin shakhsiyeed oo badan, oo muujinaya in SEO-ga maxaliga ahi uu sii socon doono koritaanka.
Kor u kicinta qalabka gacanta iyo gaaban
Dadku waxay isticmaalaan qalabka moobiilka si ay u raadiyaan internetka iyo inta ay socdaan marar badan. Tirada ayaa sii koreysa sanadkiiba, iyada oo shirkadaha dijitalka ay soo saaraan qalabyo badan oo la xiran karo, tirada raadinta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u qaadeyso qiyaasta. Natiijadu waxay noqon doontaa in baaritaannada ku salaysan dhawaanshaha ay noqdaan kuwo aad ugu habboon baaritaanada maxalliga ah iyagoo isticmaalaya goobo gaar ah. Qalabka la xiran karo waxay dib u soo celin doonaan natiijooyinka kuwaas oo aad ugu saxsan goobta goobta
Malaayiin cusub oo cusub ayaa abuuray sanad walba. Saameynta ay leedahay ganacsatada hadda jira waa in ay kordhiso tartanka. Sidaa darteed, qaar ka mid ah boggaga internetka ee khibrad sare leh ku yeeshay natiijooyinka raadinta ayaa si weyn hoos ugu dhigi kara. Shirkadaha doonaya in ay ka faa'ideystaan ​​dhaqdhaqaaqyadooda waxay doonayaan in ay bartilmaameedsadaan suuqa yar yar si ay u gaaraan aragti ku habboon ay doonayaan. Suuq-geynta Suuq-geynta SEO waa dariiqa lagu tago marka tartanku bilaabmayo inuu ku dhibaateeyo hawlaha shirkadda
Bilaabidda ololaha SEO-ga ee deegaanka
Dib-u-hagaajin deg deg ah. Hubi in ay ka kooban tahay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si looga hortago isku dhaca laba ilood.
Nidaamka deegaanka iyo dhismaha xiriirka. Isku hagaajin dhammaan isku xidhka iyo ku dhajinta mawduucyada ku haboon dadka la beegsanayo
dib-u-eegida maxaliga ah iyo maamulka. Macaamiisha ayaa ku kalsoon in dib u eegista wanaagsan ee goobta ku yaal.
Marka arrintan la dhammeeyo, mid waa inuu dejiyaa qorshe si uu u yeesho istiraatiijiyad joogta ah oo joogto ah, oo ay la socdaan nidaamka kormeerka si loo eego haddii dadaalka uu bixiyo.